Mọnde, Febụwarị 4, 2019 Wednesday, October 28, 2020 Laura Himmer
E-azụmahịa ụlọ ọrụ na-atụ anya na-eto eto na-aga n'ihu na-abịa afọ. N'ihi ọganihu na teknụzụ na mgbanwe na mmasị ịzụ ahịa ndị ahịa, ọ ga-esi ike ijide ogige ahụ. Ndị na-ere ahịa nke ejikere nke ọma na usoro ọhụụ na teknụzụ ga-aga nke ọma ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ na-ere ahịa. Dị ka akụkọ sitere na Statista, ego e-commerce na-ere ahịa zuru ụwa ọnụ ga-eru $ 4.88 trillion site na 2021. N'ihi ya, ị nwere ike iche n'echiche ngwa ngwa ahịa ahụ
Ihe nkuzi asaa maka ire ere na oge nke E-Azụmaahịa
E-Azụmahịa na-ewere ụlọ ọrụ na-ere ahịa site na nkeji. Ọ na-eme ka o sikwuoro ya ike idobe brik na ngwa agha na-ese n’elu mmiri. Maka ụlọ ahịa brik na-ngwa agha, ọ bụghị maka ịchekwa ngwa ahịa na ijikwa akaụntụ na ire ahịa. Y’oburu n’inwe ulo ahia n’ile aru, igacho iru n’ebe ozo. Nye ndị ahịa ahụ ezigbo ihe ga-eme ka ha wepụta oge gbadata ụlọ ahịa gị. 1. Nye Ahụmahụ, Ọ Bụghị Nanị Ngwaahịa
Azụmahịa ọha na eze abụrụla nnukwu okwu, mana ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-ejide "na-aga mmekọrịta" na ịzụta na ire ere ha. Gịnị kpatara nke a? Maka otu ihe kpatara ya were were ọtụtụ afọ iji zụọ ahịa e-commerce na ahịa brik na-ngwa agha. Azụmaahịa ọha na eze bụ akụrụngwa na ebumpụta ụwa akabeghị aka, ọ ga - ewekwa oge maka ya ịma aka eluigwe na ala na - eme njem nke ọma na e-commerce aghọwo taa. Okwu ndị bụ
Scoutsee bụ ngwa mkpanaka na-enye onye ọ bụla ohere ịme ego site na ịkwalite ngwaahịa ha hụrụ n'anya ma jiri kwa ụbọchị na Instagram, Facebook na Twitter. Usoro dị n'azụ ikpo okwu dị mma. Mee ụlọ ahịa gị na Scoutsee, tinye ngwaahịa gị, wee tinye ngwa mkpanaka ahụ maka ịmekọrịta mmelite na ngwaahịa ndị ahụ nwere URL dị mkpụmkpụ na ngwaahịa dị na ụlọ ahịa gị. Ọ bụrụ na azụrụ ngwaahịa site na post, onye ọrụ Scoutsee na-enweta a